Xirashada Apple ayaa sii wadi doonta inay xukumaan suuqa 2021 | Waxaan ka socdaa mac
Tan iyo markii ay Apple si rasmi ah u soo saartay Apple Watch, waxay noqotay midka ugu iibinta badan adduunka, inkasta oo kaliya uu la jaan qaadi karo iPhone-ka. Markii ay Apple soo bandhigtay AirPods-kii 2017, waxay sidoo kale noqotay iibiyaha ugu fiican, iyadoo sare u kacday darajooyinka dhagaha dhagaha ee ugu iibinta badan (kuwani waxaa lagu lammaaneyn karaa Android inkasta oo ay jiraan xaddidaadyo).
Marka loo eego ragga ku jira IDC, Apple wuxuu sii wadi doonaa inuu xukumo suuqa la gashado sannadkan. Sheegashadani waxay ku saleysan tahay xogta dhoofinta warshadaha oo dhan, xogta tilmaamaysa sida Apple u rartay 36% dhammaan aaladihii suuqa ku dhacay rubuca afaraad ee 2020.
Qeybtaan ka mid ah dharka la xiran karo, waxaan ku aragnaa boosaska ugu horeeya labada Apple Watch ee noocyada 3 ee Apple hadda u diyaariso qof walba (Series 3, Series 6 iyo Apple Watch SE), oo ay weheliso AirPods.
Haddii aan isbarbardhigno tirooyinka shixnadaha rubacii afaraad ee 2020, jebinta qalabka, waxaan aragnaa sida shixnadaha Apple Watch ay u kordheen 45% halka saddexda moodel ee AirPods (AirPods, AirPods Pro iyo AirPods Max) ay kordheen 22%.
IDC waxay sheegaysaa in tirada dharka la gashado ee ay Apple soo dirtay rubuca afaraad ee sanadka 2020 ay ahayd 55,6 milyan, halka ay ka ahayd 43,7 milyan sanadka 2019, wadarta kororka 27% Tartanka ugu weyn ee waaxdan waxaa laga helaa labadaba Xiaomi, iyadoo 13,5 milyan oo unug la soo diray iyo Samsung oo in ka yar 13 milyan oo unug ah.
Sannadkii 2020, Apple waxay soo rartay qiyaastii 90 milyan oo ah AirPods, sida laga soo xigtay IDC, oo ku raacsan qiyaasaha Ming-Chi Kuo. Si kastaba ha noqotee, sanadka 2021, tirada ayaa laga dhigi karaa 78 milyan, inkasta oo ay sii wadi doonto inay u oggolaato Apple inuu xukumo suuqan, suuq si isa soo taraysa uga dheregsan sameecadaha dhagaha iyo taleefannada casriga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Xirashada Apple ayaa sii wadi doonta inay xukumaan suuqa 2021